क्रेग्सलिस्ट किलरहरूको प्रोफाइल
सँधै सावधानी प्रयोग गर्नुहोस् जब एक अजनबी Craigslist मार्फत भेट्नुहोस्
क्रेग्सलिस्ट एकअर्कासँग जोड्ने अजनबीहरूको भित्री अनलाइन समुदाय जस्तै हो। प्रायः ईमानदार छन् तर त्यहाँ खतरनाक अपराधीहरू पनि नयाँ पीडितहरू फेला पार्न रुचाउँछन्। यहाँ Craigslist मा आफ्नो पीडितहरुलाई फेला परेका केहि खतरनाक हत्यारों को प्रोफाइल हो।
माइकल एन्डरसन। मग शॉट
क्याथरीन एन ओ ओल्सन, 24, म्याड्रिडमा स्नातक विद्यालयको लागि भुक्तानी गर्न मद्दत गर्न पैसा कमाउन चाहन्थे, उनले अनलाइन देख्यो र एक दाई खोज्दै एक महिलालाई हेरे। क्याथरीन र महिला, जसको नाम एमी थियो, इ-मेलहरू र क्याथरीनले आदान-प्रदान गरेकी छोरीलाई बेबीलाई स्वीकार्न। उनले आफ्नो रूममेटलाई टिप्पणी गरे कि एमी अजीब देखिन्छिन्, तर उनले तिनको प्रवृत्तिलाई बेवास्ता गरे र उनको निस्सन्देही कार्यमा लागे। क्याथरीनले कुनै जानकारी नभएको थिएन कि उनी बिना आत्माको बारेमा भेट्न थाल्छन्। बढि »
फिलिप मार्कोफ। प्रहरी फोटो
फिलिप मर्कफोफले यो सबै जस्तो देखिन्छ। उनी मेडिकल स्कुलको दोस्रो वर्षमा थिए, उनी जवान र राम्ररी हेरिरहेका थिए र उनी विवाहित हुन्थे। तर मर्कौफ, एक अँध्यारो पक्षमा अर्को पक्ष थियो, कि उहाँका नजिकका मानिसहरू अस्तित्वमा कहिल्यै चिनेनन्। तर उनको पीडितहरुलाई कि उनले क्रेग्सलिस्ट को माध्यम ले मिले, यो उनको एक मात्र पक्ष थियो जसलाई तिनीहरूले कभी देख्यो र यो उनको जीवन को एक लागत मा। बढि »
डाओ Xiong 191 थियो जब उनले एक निसानसँग जडान गर्न क्रेग्सलिस्टलाई प्रयोग गरे जुन उनको निसान 350z बेच्न चाहन्थे। चारका पिता, तुआ टोर लरे, उनीहरूको नयाँ व्यापारमा लगानी गर्न पैसा प्रयोग गर्ने योजना थियो। तर जब दुई भेटिए, Xiong को साँचो इरादा सर्फेस गरियो र Xiong केहि पनि किन्न मा चासो थिएन।
अलेक्जेन्डर लियोनन्स र लमम क्लेमोन
अलेक्जेंडर लियोन्स। मग शॉट
अलेक्जेन्डर लियोनन्स र लम्मर फ्लेमोनले क्रेग्सलिस्टलाई एक जवान मानिससँग जडान गर्न प्रयोग गरे जुन एक नयाँ सेलफोन किन्न चाहन्थे। जोनाथन क्लिन्ट्स, 191 ले आफ्नो चाचीलाई भने, उत्साहित भए किनभने कसैलाई आफ्नो विज्ञापनको जवाफ दिइयो। त्यो थाहा थिएन कि यो सबै सेटअप थियो र अजनबी त्यो सडक को तल को उपयोग गर्न को लागी एक प्रयोग सेल फोन को मूल्य को लागि मारने को इच्छुक थियो कि अजनबी।
Pedophiles र बाल किल्लाहरू
अभियोगित खूनी शेर्पा मिलर बुधबार
ट्र्याजिक सैम शेफरर्ड प्रकरण
कसरी लाइनहरू मेमोरी गर्ने?
सबै उमेरका लागि उत्तम एनिम
कसरी ओरेन्ज पोटेशियम डाइग्रोम क्रिस्टल बढ्दै जान्छ
1990 को दशक को सबैभन्दा ठूलो प्रोटेस्ट रक गाने
"म टेडी हुँ" चेन पत्र
अनुग्रह अनुकरण गर्दै के हो?
एलिसिस पोइन्टहरू के हुन्?
माया लिन। आर्किटेक्ट, मूर्तिकला र कलाकार
वाइड आउट - एक परिभाषा र व्याख्या
रोम टाइबर नदी
अस्थायी अभिव्यक्ति (शब्दहरू र वाक्यहरू)
तर्कमा प्रमाणको परिभाषा
कहिले गर्भपात भयो?
लिपस्टिक मा लीड को लागि सुन रिंग टेस्ट
पाकिस्तानको आईएसआई वा अन्तर-सेवा खुफिया के हो?
पहिलो जेनेसन कलेज विद्यार्थी के हो?
बोर्साइटिसको लक्षण र उपचार बुझ्न
जर्मन संगीतको प्रयोग जर्मन जर्मन कक्षमा
लामो नली बनाएर छोटो हाइड विनियम कन्फिगरेसन
देश संगीत हेलोवीन पोशाक विचार
बाइबलको बारेमा के भन्नुहुन्छ ... अकेलापन